Midowga Yurub: Addoonsiga dadka oo ku sii badanaya Qaaradda – Kasmo Newspaper
Midowga Yurub: Addoonsiga dadka oo ku sii badanaya Qaaradda
Updated - April 9, 2018 2:25 pm GMT
London (Kasmo), Kooxda ‘GRETA’ (the Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings) ee khubarada la-dagaallanka Tahriibka ee Yurub ayaa soo saaray qaylodhaan lagu sheegayo in tahriibka dadka oo addoonsi ahaan looga faa’ideysto ku sii badanayo qaaradda.
Sida ku cad Warbixintii sannadlaha aheyd ee u dambeysay ee Kooxdaas oo la shaaciyay 3dii April, tiro mar kasta sii badanaysa oo dad ah ayaa dhibbanayaal u noqda loogana faa’ideysto hawl-gacmeedka, iyaga oo lagu khasbo xaalado nololeed oo liita.
Khubaradu waxay xiganayaan dalal badan oo Yurub ah sida Belgium, Ciprus, Georgia, Portugal, Britain iyo Serbia, kuwaas oo ka faa’ideysiga dhanka shaqadu tahay sababaha ugu weyn ifafaalahaan. Waxaa jira dalal kale oo wali aan loo kuurgalin laakiin baaritaannadu ku soo wwajahanyihiin bilooyinka soo socda.
Kolleyba, Saraakiisha nabadgalyada Yurub waxay ku raad-joogaan halka ay ku dambeeyaan 65,000 oo tahriib ku soo galay (tirada oo u dhiganta 3 jibbaar middii sannadkii 2015).
In kasta oo hoos u dhac ku yimid doonyihii soo mari jiray Mediterranean Sea, qiyaasaha Ururka (IOM) ee Muhaajiriintuna tilmaamayaan in laga bilaabo 1 Jennaayo-28 March 2018, la diiwaangaliyay 14,651, Europol waxay la tahay in hawlaha tahriibku wali shaqaynayaan.
Madaxa Waaxda ‘European Smuggling Centre’ ee Boliiska Yurub ‘Europol’, Robert Crepinko wuxuu ku macnaynayaa in September 2015 Xogtoodu (Data) ku sugnaayeen, qiyaastii 30,000 oo ddadkii doomaha ah.
Kuwaas oo dhammaadkii 2016 noqday 55,000, dabadeedna gaaray 65,000 dhammaadkii sannadkii 2017. Dadkaas 14% waxay ka soo jeedaan Bariga Dhexe, 13% Afrika, 9% Asiada Bari, halka 1% ka soo jeedaan America.
Crepinko wuxuu xusay in dadka wax tahriibiya si caadi ah u sii wataan hawlahooda ka ganacsiga dadka oo gaaraya 1 Bilyan oo Euro.